Q:Azonao amidy ireo vokatra ireo izay tsy hita ao amin'ny tranokala?
A:Vitantsika izany. Azafady alefaso anay ny fepetra takianay ary te hiezaka izahay mba hanampy anareo
Q:Manana seranan-tsambo na seranam-piaramanidina eo akaikin'ny orinasa misy anao?
A:Eny, ny seranan-tsambo dia ny seranan'i Ningbo na ny seranana Shanghai ary ny seranam-piaramanidina dia Ningbo Lishe, Hangzhou Xiaoshan na Shanghai Pudong International Airport.
Q:Ahoana no ahazoana antoka ny fiarovana ny fitaterana lavitra lavitra?
A:Mpanazatra ekipa manam-pahaizana manokana izay mitandrina tsara ny famonosana rehetra.
A:Ny isa rehetra dia azo ekena amin'ny baikonao ary ny vidiny dia azo atao ho an'ny be dia be.
Q:Manome ohatra ianao? sa malalaka na fanampiny?
A:Eny, azontsika atao ny manolotra ilay ohatra ho an'ny maimaimpoana maimaim-poana nefa tsy mandoa ny vidin'ny varotra
Q:Firy taona no anaovanao raharaham-barotra vahiny?
A:Manana traikefa mihoatra ny 5 taona isika amin'ny fanondranana vokatra any amin'ny firenena eran-tany, afaka manome ny lamosina avo lenta, fitaovana, pex tavoahangy sy fitaovana hardware!